vendredi, 25 octobre 2019 09:31
Fanambaram-pananana: Nanatanteraka ny azy ny minisitra Richard Blanche Nirina
Ny 24 oktobra 2019 no voarakitra ao amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny fanambaram-pananan’ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Richard Blanche Nirina.
Ny Lalampanorenana no manery ireo lehiben’ny andrim-panjakana sy mpikambana ao amin’ny governemanta sy parlemantera hanao fanambaram-panana eny amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana mialoha ny handraisany ny asany.
vendredi, 25 octobre 2019 09:27
vendredi, 25 octobre 2019 08:08
Iles éparses: Resaka tiana hatavy
Tsy atao maro ny resaka, ahoana moa hitakianao iles éparses, nefa ianao mangataka famatsiam-bola amin'ny Lafrantsa. Karaman'ny mpiasam-panjakana aza mbola izy no manome azy (aide budgétaire).
Amboaro aloha Grande île, feno harena ary ampy iaingana ny eto, tsy hiteny afa tsy ireo bois de rose efa tapaka, efa eo an-tokotany 40 000 tonnes bois de rose, mitentina 1800 miliara ariary, tapaka androany ny hevitra amarotana an'ireo, afaka 1 volana miditra ny vola 1800 miliara ariary (en devise), milamina tsara ny eto, mividiana basy, sambo mpiady, sy fiaramanidina mpiady, dia alaina ny nosintsika. Kaontenera bois de rose 3 dia mahazo fiaramanidina mpiady 1, isika manana kontenera 2 000. Mividiana fiaramanidina mpiady 6, ahitako azy ho sahy hamaly antsika, raha haka ireo nosy ireo.
Mba jereo i Corée du Nord e, misy sahy mikasika azy? Na ny Amerikanina aza tsy sahy midaroka azy. Satria mipetrapetraka ny azy ny diplomasia, fa tsy ohatrantsika mitsambikina ery, mangataka etsy, mitaky eroa, nefa miaww etsy ihany.